RASMI: Xulka qaranka Russia oo seegi doona koobka Adduunka 2022, kaddib markii ganaax culus garka loo geliyey – Gool FM
(Yurub) 09 Dis 2019. Xulka qaranka Russia ayaan ka qeyb-gali doonin koobka Adduunka 2022-ka, kaddib markii garka loo geliyey ganaax afar sanadood ah.
Xulka Ruushka waxaa laga mamnuucay muddo afar sano ah dhammaan dhacdooyinka isboorti kaddib hay’adda caalamiga ah ee ka hortagga dawooyinka maanka dooriya ee the World Anti-Doping Agency (Wada) ay arrintaasi ku dhawaaqday.
Taasi waxa ay la micno tahay calanka Ruushka iyo heesta qaranka waddankaas aan loo ogolaan doonin inay ka soo muuqdaan dhacdooyinka koobka olombikada 2020 ee lagu qaban doono Tokyo iyo Koobka Adduunka ee 2022 ka dhici doona Qatar.
Inkasta oo ganaaxa la saaray, haddana Russia waxay awood u yeelan doonaan inay ku tartamaan Euro 2020 – oo St Petersburg ay noqon doonto magaalo martigelinaysa tartankaas, iyadoo guddiga Yurub ee Uefa aan loo qeexin inuu yahay dhacdo wayn oo la xiriirta xukunno ka dhan ah jebinta xadgudubka dawooyinka maanka dooriya.
Laakiin ciyaartoyda waddanka Ruushka u dhalatay qaarkood ee aan lagu helin inay isticmaaleen dawooyin kordhiya awoodda ama maanka dooriya ayaa awood u yeelan doona inay ka soo muuqdaan tartammadda aan kor ku soo sheegnay, iyagoo aan isticmaalaynin calanka dalkooda Ruushka.
Guddiga hay’dda magaceeda loo soo gaabiyo Wada ayaa go’aankaan lama filaanka ah kaga dhawaaqay kulan ay ku yeesheen Magaalada Lausanne ee Waddanka Switzerland.
Waxayna arrintaan imaanaysaa kaddib markii hay’adda ka hortaga dawooyinka maanka dooriya Ruushka ee la yiraahdo Russia’s Anti Doping Agency (Rusada) la sheegay inay soo gudbisay warbixinta sheybaarka ee lagu sameeyey ciyaartoyda oo been abuur ah, waxaana ay gudbiyeen macluumaad qaldan bishii Janaayo ee sanadkan 2019.
Waxay haystaan 21 maalmood oo ay racfaan uga qaataan xayiraadda lagu soo rogay.